Dhaqanka Shirkadda - Dongguan Taiyang Almulaha Kiimikada Kiimikada Co., Ltd.
Qiyamka Muhiimka ah: In la sameeyo ganacsi weyn, in laga caawiyo shaqaalaha in ay guuleystaan.
Himilada: Inaad noqoto shirkadda ugu ixtiraamsan ee ku takhasustay kiimikada adduunka
Howlgalka: Si looga dhigo warshadaha kiimikada Shiinaha mid awood badan, ha u ogolaato cirku inuu ifaxo oo nadiifiyo biyaha
Ruuxayagu waa mid fudud, u hibeeya oo is-dhiirrigaliya.
Himiladayada: Wax walba waa inay isbarbar dhigaan qiyamkeena asaasiga ah.
Halbeegga wada-shaqeynta: Qof walba waa inuu lahaadaa qiime isku mid ah, aragiisa iyo dhaqankiisa, waa inuu leeyahay awood fulineed ballaaran sidoo kalena qeybaha oo dhami waa inay u shaqeeyaan hal unug, horumarna u gaara isla ujeedo.
Xeerka Anshaxa ee Cadre: Inuu hayo qalbiga kooxda, wadnaha shirkadda, iyo qalbiga macaamilka
Ruuxa Cadre: Majiro xanuun, kasbasho la'aan
Hirgelinta Cadre: Go'aannada shirkadda si adag ayey u taageeraan; si dhakhso leh u dhaqan geli go'aanada shirkada
Xulashada Caddeedka: Meel u hel go'aan, shaqsi tababbaran, natiijooyin aad u wanaagsan, xulo kuwa ugu fiican.
Falsafada badbaadada: Jiritaanka wadada saxda ah ayaa ah wadada kaliya ee lagu waari karo weligeed.
Falsafadda aragtida: Jooji cabashada. Qabso dhaqso. U soo jeedi talo soo jeedin fool ka fool ah sida qof jilicsan, ha u dhigin sidii qof xun.
Addeecda: Maamulayaashu waa u hoggaansamaan horjoogayaashooda. Markay dhaqanka kooxaha yaryar iyo xiisaha danaysi la leeyihiin dhaqanka iyo danaha shirkaddu, waa inay ka tanaasulaan xiisaha kooxda yar una hoggaansamaan dhaqanka weyn iyo danaha shirkadda.
Hirgalinta: Haddii ay sax tahay ama qalad tahay, fuliso waxa ay shirkaddu ku go'aamiso iyadoo go'aan leh.
Wadashaqeynta: u dhammee waxyaabaha si daacad ah maadaama ay ahaayeen shaqooyinkaaga shaqsiyeedna qaado masuuliyada oo dhan markay arimahu khaldamaan.
Shaqo: Aaminaad. Kuwa dhaxalka leh ee khibrada fiican leh ee shirkada dhaxalka leh kuna soo cusboonaysiiya salkaas.
Dimuqraadiyadda: U fur fur talooyinka iyo doodaha ka hor intaadan gaadhin go'aanka u dambeeya isla mar ahaantaana la diiwaan geliyo, si buuxda u dhaqan geli.
Adkeysi: Xusuusnow aragtida shirkadda marka aad jah wareersan tahay, oo hore u sii dhaqaaq, xusuusnow aragtida shirkadda markay qof ka baxdo, horayna u soco. Ku midow agagaarka maareeyayaasha sare ee madaxweynaha u qaata xudunta, kuna adkaysta ilaa laga gaadho guul.
Caawinaad: Midba midka kale caawiya oo wada socda, haddii hal qof gadaal u dhaco, dadka kale oo dhami way ku dhiirrigelin doonaan isaga / isaga.
Barashada: Sii wad barashada; Gudaha, wax ka baro asxaabta ugu caansan shirkadda iyo, isku day inaad noqoto mid aad u fiican, dibadda, illaa inta kuwa kale leeyihiin faa'iidooyin, waa inaan wax ka barannaa iyaga.
Koritaanka: Waxyaabaha ugu adag ayaa waliba sii xoojin doona. Tani waxay si gaar ah run u tahay feeraha 3-5 sano, marka waa inaan si adag ula dagaalanaa.
Muuqaalka: U soo bandhig muuqaalkii ugu fiicnaa ee shaqaalaha warshadaha kuwa kale.
Guul: Markaad gaadho guul, ha u maleyn inay ku filan tahay; Markaad guuleysan weydo, si adag u rumow inaan nahay sida kuwa kale oo dhan.
Abaal-marin: Bal isweydii waxa aan u qabanay shirkadda ka hor intaanan ka hadlin abaalmarinta. Go'aan gaar ah macnaheedu waa in la yareeyo. Balanqaad aad u weyn macnaheedu waa in la helo waxbadan.
Caddaalad: Hayso ruuxa cibaadada.
Mahadnaq: dareemo mahadsanid TY. U dadaal naftaada TY marka aan halkaan joogno, hana welwelin TY xitaa markaan baxno.
Falsafada Shaqo: Booska ayaa ah kan ugu horreeya isla markaana karti waa kan labaad.
Falsafada hirgelinta: Nidaamku waa kan koowaad, hoggaamiyeyaashu waa kan labaad.
Macaamiil: Kula kulan macaamiisha si xushmad leh; la xiriir macaamiisha si habsami leh; ugu adeega macaamiisha si taxadar leh; ku faafi jacaylka meelkasta oo ah qiimo kordhin macaamiisha.
Alaab-qeybiye: Wada shaqee muddo dheer, wadajir u koraan oo guul xiriir guul leh gaadho.
Jawiga: si adag u shaqee, si farxad leh ugu noolaada oo qoys wanaagsan leh.